Türkiye kayak sporuna ev sahipliği yapacak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 Kayseriတူရကီဟာနှင်းလျှောစီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်
12 / 02 / 2015 Levent Ozen 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, TELPHER နှင်းလျှောစီးဖို့တူရကီတို့ကတည်ခင်းဧည်ခံရဖို့ yorumlar kapalı
တူရကီဟာနှင်းလျှောစီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်: တူရကီပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှင်းလျှောစီးများအတွက်ဥရောပဖလားချန်ပီယံရှစ် hosting ဖြစ်ပါတယ်။ Erciyes နှင်းလျှောစီး (FIS) သည်ဥရောပဖလားချန်ပီယံရှစ်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း740 အားကစားသမားမြားတကျရောကျနှင်းလျောစီးမှာကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှ။
Kayseri ဟာချန်ပီယံရှစ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mustafa Yalcin, လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Mustafa Eskici အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့, Erciyes Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌ Murat Cahit Cıngıနှင့်တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတောင်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌ Memet ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကအစဉ်အဆက်တူရကီCıngıအတွက်လုပ်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချန်ပီယံအိမ်မှာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင်းလျှောစီး 250 သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Eruoluk စင်တာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာချန်ပီယံအိမ်ရှင်အဖြစ်ဖွဲ့သော "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်ရည်မှန်းချက်ဟာကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "သူကဆိုသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်း Erciyes နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ချန်ပီယံနှင့်အတူCıngıသူတို့ 13-15 tarihlmer အတွက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဆိုသည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mustafa Yalcin ကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအသီး Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကိုထမ်းရန်စတင်ကပြောသည်။ Yalcin, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး, Kayseri ၏မြို့, ကနှင်းလျှောစီးစင်တာအတွက်အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများခဲ့ "ကမရှိတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏မြို့အဖြစ်ရည်ညွှန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ စက်မှုနှင့်ခွဲကမ္ဘာ့အဆင့်မီနှင်းလျှောစီးအဘို့အလိုကိုဖန်ဆင်းကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောချန်ပီယံကဒီမှာဖြစ်ဖို့နဲ့ငါယူလှူဒါန်းခဲ့သောသူတို့အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘယ်မှာရှိ။ "သူကဆိုသည်။
ယင်းချန်ပီယံတို့အတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အဦများစပ်လျဉ်းလေ့လာတွေ့ရှိချက် "လ 6-7 စဉ်အတွင်း FIS အရာရှိများနှင်းလျှောစီးဆီသို့ရောက် လာ. , ကပြောသည် Memet တောင်ပိုင်း, ထို့နောက်ကျနော်တို့အလုပ်ကိုဘယ်မှာရှိသနည်းဟုစုံစမ်းပြီးနောက်ဤနေရာတွင်ချန်ပီယံပေးခဲ့ကုစားနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ရှိထားတဲ့အဘို့နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံမှာတပ်မက်လိုချင်သောအခွအေနမြေားရနိုင်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကျနော်တို့အဓိကနှင်းလျှောစီးချန်ပီယံကျင်းပခဲ့သည်။ ဤသည်ချန်ပီယံအဆိုပါ Erciyes နှင်းလျှောစီးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံယူပြီးအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ "သူကဆိုသည်။
ဂျာမဏီ, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ချန်ပီယံရှစ်, နယ်သာလန်, အီတလီ, သြစတြီးယား, ဆလိုဗေးနီးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 40 ကနေအားကစားသမား join ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ပြိုင်ပွဲကနေ4အမျိုးအစားတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်, အများဆုံးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Erciyes ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်း 240 ဖို့အားကစားသမား join ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
ဖြစ်စဉ်ကိုဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုနှင်းလျှောစီးအားကစားဘဝမှကယျတငျ 05 / 01 / 2015 Çözüm Süreci Kayak Sporuna Katkı Sunuyor :Bitlis’te, kar yağışını fırsat bilenler kentteki kayak merkezlerine akın ederken, vatandaşlar çözüm sürecinin kayak sporuna katkı sağladığını belirtti. Kentte hafta boyu güneşli geçen havanın…
နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံရှစ် Host ပြု Davraz 01 / 03 / 2014 Host ကလုပ် Davraz နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံရှစ်: လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာနှင်းလျှောစီးအငယ်တန်း၏ Isparta ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု, ကြယ်, လူငယ်ချန်ပီယံရှစ်တူရကီဖြစ်ရပ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ 1-2 သည်မတ်လတွင် Davraz နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၌ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းမှ Eskisehir 30 / 09 / 2012 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားအသင်း (UIC) 10 ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (UIC-RAME) တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရထားလမ်းသင်တန်းစင်တာ (MERTCe) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒေသဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် 29 / 09 / 2012 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားအသင်း (UIC) 10 ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (UIC-RAME) တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရထားလမ်းသင်တန်းစင်တာ (MERTCe) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒေသဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
UTIKAD2။ FIATA World Congress တွင် '' ပြီးတာနဲ့မူလစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှု (အထူးသတင်းများ) Make ဖို့ဘာ 06 / 04 / 2013 UTİKAD2။ FIATA World Congress ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်သူအသင်းအဖွဲ့ (FIATA) မှ 52 ကျင်းပမည်။ 13-18 ကမ္ဘာ့ကွန်ဂရက်သည်အောက်တိုဘာ 2014 အကြားအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ UTİKAD-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး…
Hakkaride 160 ကလေးများနှင်းလျှောစီးကျောင်းမှ
Uludağdaဆီးနှင်းထူ 2,5 မီတာသို့ရောက်ရှိ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (250) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)